M-Bwel (Online Editor) Website URL: 16
Jul Published in World News Be the first to comment! နိုဘယ်ဆုရှင် လူရှောင်ဘိုအား သင်္ဂြိုဟ်ကာ သူ၏ ဇနီးကို လွှတ်ပေးခဲ့ပြီဟု တရုတ်ဘက် ကဆို ရှန်ယန်း
Jul Published in World News Be the first to comment! မြေကျွံပေါက်ကြီးကြောင့် ဖလော်ရီဒါတွင် အိမ်နှစ်လုံး နစ်မြုပ်သွား ဖလော်ရီဒါ
Jul Published in World News Be the first to comment! လန်ဒန်မြို့တွင် တစ်ညအတွင်း အက်စစ်နှင့် တိုက်ခိုက်မှု ငါးကြိမ်ဖြစ်ပွား လန်ဒန်
လန်ဒန်မြို့တွင် မကြာသေးခင်က အက်စစ်နှင့်တိုက်ခိုက်မှု ငါးကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ထိုဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ လူနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီး ထားသည်ဟုသိရသည်။ ထိုတိုက်ခိုက်မှု အားလုံးမှာ ကြာသပတေးနေ့ညတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တိုက်ခိုက်မှုများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟု လန်ဒန်ရဲတပ်ဖွဲ့က သောကြာနေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်။ တိုက်ခိုက်မှု ငါးခုအတွင်း အမျိုးသားတစ်ဦး၏ မျက်နှာတွင် ဆိုးဆိုးရွားရွား ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပြီး တိုက်ခိုက်မှုများ အားလုံးသည် မိနစ် ၇ဝ အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယင်းသည် ဗြိတိန်မြို့တော်တွင် ဖြစ်ပွားသည့် နောက်ဆုံးသော အက်စစ်အသုံးပြုသည့် တိုက်ခိုက်မှုများလည်း ဖြစ်သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောသည်။
5678...1011121314Page 10 of 2912 Latest Articles ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၂-''စံမညီတရား မဝင်ဆေးဝါးနှင့် ဆေးဝါးအတုတို့၏ အန္တရာယ်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး နှင့် တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာလူထု ပညာပေးပြပွဲ''ကို ဇူလိုင် ၂၉ ရ...23-07-2017 Hits:24 Others မိုးဆက်ကို ခန္တီး၊ ဇူလိုင် ၂၂ - စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ခန္တီးမြို့ ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်း တစ်လျှောက်တည်ဆောက်ထားသည့် ချင်းတွင်းမြစ်တာရိုး ဇူလိုင် ၁၈ ရက်ကပြိုကျခဲ့ရာ လူ...23-07-2017 Hits:52 life မိုးဆက်ကို ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၂-စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် ရက် ပေါင်း ၂ဝ ခန့်ပိတ်ထားခဲ့ရသော အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်း ၃ဝဝ ကျော် အနက် ၁ဝဝ ကျော်ကို ပြ...23-07-2017 Hits:51 life မိုးဆက်ကို စတော့ဟုမ်း- ဆွီဒင်ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဖြစ်သူ အန်ဒါဝီဘာ့ဂ်ျက ဖန်တီးနေတဲ့ Ambiancé ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အ ချိန်အကြာဆုံး ရုပ်ရှင်အဖြစ် စံချိန် တင...23-07-2017 Hits:180 World News မိုးဆက်ကို Business Info